Umthandazo ku-Saint Jude Thaddeus wamatyala anzima kakhulu. ?
Umthandazo ku Ongcwele uJude Thaddeus yamatyala anzima kakhulu Kuzo zonke izicelo umntu anokuba nazo, kukho iimeko ezinzima kunezinye. Kwaba kukho lo mthandazo unamandla.
Apha awukwazi ukucela izinto ezilula okanye ezingenamsebenzi, oko kukuthi, lo mthandazo ukhethekileyo ukucela izinto ezingenakwenzeka njengokuphilisa ngokungummangaliso, umzekelo.
Iimeko zempilo zezona zixhaphakileyo, nangona kunjalo unokucela enye into.
Kwiimeko apho kukho abantu abalahlekileyo, abantwana okanye abantu abadala, uSan Julius Tadeo uyacelwa ukuba ababonise indlela egodukayo.
Into ephambili lukholo olwenziwe ngayo.
Ukulangazelela ukubona ummangaliso kuyinto eqhelekileyo, amaxesha amaninzi kukho iimeko ezibonakala ngathi zivalile, kodwa kwezi meko umthandazo unokuba kuphela komthombo wethu woxolo kunye nokuthembana.
1 Umthandazo ku-Julius Tadeo oNgcwele kwiimeko ezinzima kakhulu nezidimazayo Ngubani?
2 Umthandazo kuSt. UJude Thaddeus wamatyala anzima kakhulu kunye nawokuphelelwa lithemba
3 Ngaba umthandazo unamandla?
4 Ndifanele ndithandaze nini umthandazo weSt. UJude Thaddeus?
Umthandazo ku-Julius Tadeo oNgcwele kwiimeko ezinzima kakhulu nezidimazayo Ngubani?
Uyaziwa ngokuba ungcwele osinceda kwiimeko apho kubonakala ngathi akukho sisombululo. Uyakhankanywa kwiincwadi zeVangeli ukuba wayengomnye wabafundi bakaYesu abalishumi elinambini.
Ukuba ngomnye wabapostile abalishumi elinambini wayekufutshane neNkosi ngelo xesha wayesemhlabeni okwimo yomntu.
Uhlala edidekile noYudas Skariyoti, owayenguye owanika uYesu abaFarisi.
UJudas Tadeo akanalo ulwazi oluninzi lwekhonkrithi olusitshela apho luvela khona, kodwa into eyaziwayo ngamandla ayo ukunika imimangaliso engenakwenzeka.
Uonwa njengoyena mntu usoloko efuna ukubizwa namhlanje, ke kubaluleke kakhulu ukwazi ngakumbi ngembali yakhe.
Amandla akhe ommangaliso alele kwinto yokuba esebenza njengomlamli phakathi kwethu noYesu, ngale ndlela kuyakholelwa ukuba izicelo zithatha ngokubaluleka nangaphambi kwetrone yasezulwini kwaye ngenxa yesi sizathu ziphendulwa ngokukhawuleza nokuba kunzima kangakanani okanye kunzima kangakanani na kummangaliso oceliweyo kwi umthandazo.
Owu Apostle oqaqambileyo uSt. Isicaka esithembekileyo kunye nomhlobo kaYesu. Igama lomngcatshi onikele inkosi yakho ethandekayo ezandleni zeentshaba zakhe ngunobangela wokuba abaninzi bakulibale. Kodwa iCawe iyakuhlonipha kwaye ikumema kuwe wedwa njengomlandeli wamatyala anzima nawanqwenelekayo.
Ndithandazeleni ukuba ndingonwabi kwaye ndisebenzise, ​​ndiyanibongoza ngeli lungelo likhethekileyo ninikwe nina. Ngayo ukunceda ukubonakala nokukhawuleza xa phantse lonke ithemba liphulukene.
Yiza kundinceda kule ntswelo inkulu.
Ukuze ndifumane intuthuzelo noncedo lwezulu kuzo zonke iimfuno zam, iimbandezelo kunye nokubandezeleka, ngakumbi (yenza isicelo sakho ngasinye apha). Kwaye ukuze ambonge uThixo kunye nawe kunye nabo bonke abakhethiweyo ngonaphakade kanaphakade.
Ndiyakuthembisa, wena Yude ozukileyo, ukuba ungasoloko ukhumbula olu ncedo lukhulu kwaye andisoze ndikuyeke ukukuhlonipha njengomkhuseli wam okhethekileyo nonamandla kwaye ndenze konke endinako ukukhuthaza ukuzinikela kwakho.
Izigulo ezibulalayo ezinje ngomhlaza, iingozi ezimbi, abantu abalahlekileyo, ukubanjwa kwabantu, ukubanjwa kwemfuyo kunye nazo zonke izicelo ezijongwa njengezinzima zizizo ekufuneka ziqwalaselwe kulo msulwa.
Kuya kufuneka ucele ngokukhethekileyo ukuba ufuna ukufumana ntoni, kuba oku kufanele ukuba ulazi kakuhle ityala, asinakucela ukuba siphilise umntu, kungcono ukukwazi ukuthandaza ngokuthe ngqo, usebenzisa igama lomntu kunye negama lesi sifo, umzekelo .
Ingcali kwizizathu ezilahlekileyo, kwezo meko apho abantu baphulukene khona nokholo, apho kungekho themba.
Lawo ngamaxesha apho amandla omqeshi akhoyo. Ingcali ekusindiseni amandla okukholelwa kwiNgcwele osinceda ukugcina ukholo lwethu.
Ngaba umthandazo unamandla?
Yintoni eyenza umthandazo kuSt. UJude Thaddeus wamatyala anzima kakhulu kunye nawokuzithemba anamandla lukholo olo lwenziwa ngalo.
Ilizwi likaThixo lisifundisa ukuba ukuba sicela uBawo ukuba akholelwe ukuba uza kusinika mmangaliso.
Ke ngoko siyakuqonda ukuba kuphela kwemfuneko yesivakalisi ukuzisa isiphumo. Ukubuza ngaphandle kokholo esinokuthembela kwinkoliseko kaThixo kunye noncedo kukuthandaza ngelize.
Angekhe sibuze umntu esingakholelwa ukuba asinike oko sikucelayo. Konke okuceliweyo kufuneka kube kukukholelwa ngokusuka entliziyweni.
Ukholo lwenene. UThixo, umyili wezinto zonke, unamandla okusinceda kuyo yonke into esiyifunayo kwaye uneengcwele zakhe ukusinceda ukuba sizifezekise, ke sukuthandabuza ukuthandaza naphina xa uzifuna.
Ndifanele ndithandaze nini umthandazo weSt. UJude Thaddeus?
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ungawenza nini umthandazo onamandla?
Ungawuthandaza umthandazo ku-Stude Thaddeus wamatyala anzima kakhulu kunye nawokunqwenela xa ufuna.
Le ngcwele inamandla iziva zonke izicelo zakho, kuba kwanele ukuthandaza ngokholo nangokholo oluninzi ngaphakathi entliziyweni yakhe.
Unakho kwaye kufuneka uthandaze yonke imihla ngaphambi kokulala okanye yonke imihla xa uvuka.
Ukuba unexesha, sicebisa ukuba ukhanyise ikhandlela emhlophe ukuze unikezele kuSan Judis Tadeo.